Rubhapatidzo rwemvura
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Rubhapatidzo rwemvura
Izwi rechiGiriki “baptize” rinoreva kunyika kana kunyudza mumvura.
Rubhapatidzo chiratidzo chekufa kuvigwa nekumuka kuvakafa. Munhu anovigwa pasi pemvura apo mvura inomiririra nyika inocherwa munhu ovigwa pasi payo.
VAROMA 6:3 Ko hamuzivi here kuti isu takabhapatidzwa muna Kristu Jesu, takabhapatidzwa murufu rwake?
4 Naizvozvo pakubhapatidzwa takavigwa pamwechete naye murufu kuti saiye Kristu akamutswa kuvakafa nokubwinya kwaBaba saizvozvo nesu , tifambe nevupenyu bwutsva.
5 Nokuti kana takava vamwe naye pakufanana naye, parufu rwake, tichadaro vo pakumuka kwake.
Rubhapatidzo rwemvura rwunoratidza kuviga munhu mutsaru ane zvivi muguva ofukidzwa nenyika kwomuka munhu mutsva, ane Mweya waKristu mukati make. Achimuka kubva “muguva” rakanyorova kuzotanga hupenyu hutsva akanangana neShoko raMwari uye neMweya mutsvene waMwari, kwete pazvinhu zvenyama kana zvenyika.
Kune nzira dzakasiyana-siyana dzerubhapatidzo, zhinji dzacho dzinoda kutiza kubva pakunyangadzwa nekunyikwa uye pazvinhu zvisingavaitiri ivo zvinouya nekunyikwa kwakazara mumvura. Saka “rubhapatidzo” rwekumwaiwa mvura kana kuita kunge waiswa mumvura ndidzo nzira dzine mbiri. Asi, hativigi chero munhu nekumumwaya mavhu kana kuti kuisa chikamu chemuviri wake muguva.
Vakawanda vanobhapatidza vanhu vasati vagamuchira Jesu, vasati vatendevuka asi Petro haana kuita izvi.
MABASA AVAAPOSTORA 2:38 Petro akati kwavari; Tendevukai mumwe nemumwe wenyu abhapatidzwe nezita raJesu, kuti mukanganwirwe zvivi, mupiwe chipiwa choMweya Mutsvene.
Tarisisai mafambiro ezvinhu apa. Chekutanga kutendevuka kwozoita kuvigwa kwerubhabhatidzo.
Kutendevuka kwechokwadi kunoreva kufa kwemunhu wekare pamabasa. Unokwanisa chete kuviga munhu akafa kare.
Ukatendeuka nekugamuchira Jesu saIshe neMuponesi wehupenyu hwako, kutenda kwako kutsva kunoiswa pakuedzwa kukuru. Ungaone ukaziva here rubhapatidzo rwemuMagwaro rwuri kuna Mabasa avaApostora kubva kune urwo rwuri kuitwa mumakereke anhasi uno? Iyi mibvunzo yakaoma kubudirira pairi. Ngatitarisei dzimwe nzira dzerubhapatidzo.
1. Rubhapatidzo rwusina mvura zvachose. Rwakabva pambavha iri pamuchinjiko yakapinda denga isina kubhapatidzwa.
Asi kurovererwa pamuchinjiko, aive asina mukana wekubhabhatidzwa.
Pechipiri , murairo wekuti vanhu vabhapatidzwe wakazopiwa naJesu mushure mekumuka kubva kuvakafa.
MATEO 28:19 Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, muvabhapatidze muzita raBaba nero Mwanakomana neroMweya Mutsvene.
20 Muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurairai imi. Tarirai ndinemi mazuva ose kusvikira pakuguma kwenyika.
“Muvadzidzise”. Chikamu chekudzidzisa chataurwa ruviri. Saka pese patinoda kunzi tidzidziswe zvinoreva kuti panenge pari nechinhu chakaoma kunzwisisa. Izvi hazvisi nyore sezvazvinonzwika zviri.
Chekutanga, rubhapatidzo rwunomiririra rufu apo tinoshandisa mvura kwete ivhu.
Chechipiri, tinoda zvakare kudzidziswa zita raMwari. Mwari ndiye ega Munhu angatsanangurwe nemazita ezvinzvimbo ekuti Baba Mwanakomana naMweya Mutsvene .
Asi hapana kana rimwe remazita ezvinzvimbo aya Zita remunhu. Saka Zita raBaba Mwanakomana naMweya Mutsvene nderekuti kudii? Nemamwe mazwi Zita raMwari nderekuti kudii?
Zvinoshamisa, maKristu mazhinji haakwanisi kupindura mubvunzo wakareruka kudai.
Nekuti vanotenda muTiriniti, sevanhu vechipirisita chekuBabironi nevekuEgipita, vakaramba vachitsvaga maZita matatu eVanhu vatatu.
Izwi rekuti “Tiriniti” harisi muBhaibheri asi zvakadaro ndizvo zvinotenda maKristu akawanda uye izwi risiri muMagwaro rekuti “Tiriniti” rinovaita kuti vasakwanise kuona zita raMwari rechokwadi, Jesu Kristu.
Zita rekuti Jehova rakabata kuTestamente Yekare uye Zita rekuti Jesu harina kubvira rataurwa kuTestamente Yekare.
Zita raJesu rinotonga kuTestamente Itsva uye zita rekuti Jehova harina kubvira rataurwa kuTestamente Itsva.
Saka Jehova (Mweya) wekuTestamente yekare akazova Jesu Munhu wekuTestamente Itsva.
VAKOROSE 2:9 Nokuti kuzara kwevuMwari kunogara Maari pamuviri.
Ngatitarisei zvishoma dzimwe nzira dzerubhapatidzo dzinoshandiswa nemamwe masangano akasiyana anosvika 40 000 anomiririra maKristu anhasi. Uye mamwe masangano ane dzimwe nzira itsvawo ari kuramba achinyuka.
2. Kubhapatidza vana nekuvamwaya mvura mumisoro yavo nechero mvurawo zvayo.
Asi izwi rechiGiriki rekuti “baptize” rinoreva kunyika.
3. Kubhabhatidza vana nekuvamwaya “mvura tsvene” (holy water) pamisoro yavo.
Asi chirikowo here chinhu chakaita semvura tsvene?
Kana nhunzi ikawira mumvura tsvene, mvura iyi inenge yasvibiswa here kana kuti nhunzi inenge yaitwa tsvene?
Nhaurirano pamusoro peizvi ichiri kuenderera kubva muNguva yeRima. Mvura tsvene ingori mvura yakaita seimwe mvura, kana ikasiiwa yakadaro kwenguva refu, inotoitawo mweya uye mazerera kunge imwe mvura yese. Chinhu chinochengeterwa mvura tsvene chinotofanira kusukwawo, sezvinongoitwa zvinhu zvese zvatinochengetera mvura.
Mwari ega ndiye mutsvene.
Panogara Mwari patsvene, nekuda kweHuvepo Hwake.
Munguva dzeTestamente yekare Mwari aigara muTemberi yemaJuda kuiita nzvimbo tsvene. Huvepo Hwake muTemberi yaive muguta reJerusarema zvakaita kuti Jerusalema rinzi guta dzvene. Huvepo Hwake muJerusarema guta rekuIsraeri hwakaita kuti Israeri inzi nyika tsvene.
Muna AD 70 mauto ekuRoma akaparadza temberi yemaJuda pasi pemukuru wavo Titus. Saka haisisiri nzvimbo inogara Mwari. Bhuku raMabasa avapostora rinotsanangura kuti sei nenzira yeMweya Mutsvene rubhapatidzo rwakaitika pazuva rePentecosti, Mwari akauya kuzogara mumoyo yevarume nevakadzi, kuvashandura kuti vave mabwe anorarama eTemberi yake yemweya isina kuvakwa nemaoko evanhu.
I PETRO 2:5 Nemi vo, samabwe mapenyu, muvakwe muve imba yoMweya, muve Vupirisita vutsvene, kuti mubaire zvibairo zvoMweya, zvinofadza Mwari nokuda kwaJesu Kristu.
VAHEBERU 9:11 Asi Kristu akati asvika ari muPirisita mukuru wezvinhu zvakanaka zvinozouya, akapinda napatabhernakeri yakapfuura pakukura napakukwana, isina kuitwa namavoko, ndiko kuti isati iri yokusikwa kuno, (temberi yamaJuda).
Apo paiparadzwa Temberi yemaJuda nemauto ekuRoma, madzimambo ekuRoma akauraya makristu aisvika 3 miriyoni mukuedza kuparadza Temberi yemweyakana kuti Tabernakeri, iyo yakavakwa kupfurikidza maKristu ana Mwari vari kurarama mukati mavo.
Saka nhasi unokwanisa kuwana varume nevakadzi vatsvene, kana Mweya waMwari uchirarama mavari, asi haukwanisi kuwana mvura tsvene sezvo Mwari haararame mumvura.
4. Kubhapatidza vana kupfurikidza munhu anonyika chigunwe chake mumvura onyora muchinjikwa pamhanza yemwana.
Uku kutevedzera zvinoitwa nemaHindu achishandisa dota. Hapana kunyikwa mumvura apa.
5. Kunyika mwana muchinhu chinochengeterwa mvura chiduku kusvikira kwasara musoro wake chete usiri mumvura. Pachokwadi havangadi kuti mwana anyure.
Asi kubhapatidza zvinoreva kunyika zvese. Haungavigi chero munhu uchisiya musoro wake kunze kwevhu.
6. Kunyika kwekukasika, kwemwana mumvura sezvinoitwa nekereke yemaOrthodox kuGiriki. Nekuti “baptize” zvinoreva “kunyika zvese" muchiGiriki.
MuBhuku raMabasa avapostora 2 vhesi 38, Petro anoti tinofanira kutendeuka tozobhabhatidzwa. Vana vaduku havakwanisi kutendeuka saka nekudaro havafaniri kubhabhatidzwa.
7. Kumwaya munhu mukuru nemvura mumusoro wake.
Uku hakusi kunyika kana kunyudza.
8. Kudira mvura kubva mudende kana komichi mumusoro memunhu mukuru .
Uku hakusi kunyika kana kunyudza munhu.
9. Kunyudza munhu mukuru murwizi kanodarika kamwechete.
Munhu anovigwa kamwechete.
10. Kunyudza munhu negotsi akatarisa mudenga, katatu. Achinyikwa muzita raBaba (vanova Jehova). Munhu obva aburitswa pamusoro pemvura onyudzwa zvakare zvino muzita reMwanakomana ( anova Jesu). Zvino munhu anobva adzoswa zvakare pamusoro pemvura ozonyikwa zvakare muzita reMweya Mutsvene (Uyo asina Zita muBhaibheri).
Chekutanga, Jesu haana kuti “ Bhapatidzwai Muzita raBaba neMuzita reMwanakomana neMuzita reMweya Mutsvene”. Izvi zvinotaura Mazita matatu.
MATEO 28:19 Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, muvabhabhatidze muzita raBaba nero Mwanakomana neroMweya Mutsvene.
Jesu akataura pamusoro peZita rimwechete nekuti Baba uye Mwanakomana naMweya Mutsvene.
Saka tinoda kudzidziswa kuti tinzwisise kuti Zita rimwechete iri nderaMwari, Ane maZita eZvinzvimbo zvitatu.
Dai paive neMazita matatu aireverwa, zvaisada kudzidziswa nezvazvo. Pachokwadi vanhu vatatu vaizovawo nemazita avo matatu.
Chechipiri, tinoviga munhu kamwechete, kwete katatu.
Zita raBaba Mwanakomana naMweya Mutsvene ndiani? Baba Mwanakomana naMweya Mutsvene maZita eZvinzvimbo kwete Zita raMwari.
(Jehova ndiro Zita raBaba Jesu ndiro Zita reMwanakomana, asi hakuna zita rakapihwa muBhaibheri reMweya Mutesvene). Saka vese vanotevera Tiriniti vane mazita maviri ekudaidza Vanhu vatatu. Izvi hazvikurudziri. Nzira yekuti “Baba Mwanakomana naMweya Mutsvene” parubhapatidzo haiburitsi Zita raMwari. Nekuti takanzi tibhabhapatidzwe muzita rimwechete, kwete mazita akawanda. Saka haisi nzira inofadza kushandisa kuita izvi.
Baba neMweya Mutsvene havana kubvira vafa, uye havana kubvira vamuka kuvakafa. Saka rubhabhatidzo rwemvura harwuratidzi chero chinhu chimwechete chavakaita.
Rimwe dambudziko nderekuti hapana patakaudzwa muBhaibheri kuti Zita reMweya Mutsvene ndiani. Saka zvinorevei kana isu tichiti “muZita reMweya Mutsvene” kana tisingazivi kuti Zita racho ndiani, kunyanya kana tikashingirira kuti Mweya Mutsvene Munhu akazvimiririra pahuMwari?
11. Kunyikwa kamwechete munhu akatarisa pasi muZita raBaba Mwanakomana naMweya Mutsvene nekuti Jesu aive akatarisa kumberi paakarovererwa pamuchinjikwa.
Tinoviga vanhu vakarara nemusana, kwete nezviso zvavo.
Zvakare, nzira iyi haitiudze kuti zita raBaba Mwanakomana neMweya Mutsvene ndiani. MaKristu anoramba achinyenyeredza nyaya iyi yeZita raMwari nekuritsiva nemazita matatu ezvinzvimbo zvaMwari. Sekunge maZita eZvinzvimbo zvitatu iZita. Kutaura kuti “Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene” iZita kufunga kwakadzimaidzwa.
12. Kunyika munhu negotsi muZita raBaba Mwanakomana naMweya Mutsvene. Rubhapatidzo urwu rwunomiririra chikamu chekuviga, asi zvakare hariburutsi pachena kuti Zita raBaba Mwanakomana naMweya Mutsvene ndiani. Mazita ezvinzvimbo matatu haangatsivi zita rimwechete.
Hapana munhu muBhaibheri akabhabhatidzwa nenzira iyi.
13. kunyudzwa mumvura kamwechete muzita “raJesu chete” kuti tiregererwe zvivi.
Zvivi zvedu zvinogezwa neRopa raJesu Kristu, kwete Mvura yatinobhapatidzirwa.
ZVAKAZARURWA 1:5 Nokuna Jesu Kristu chapupu chakatendeka, dangwe kuvakafa, mubati wamadzishe enyika. Kuna iye wakatida, wakatisuka, pazvivi zvedu neropa rake.
Rangarirai, vanhu vakawanda nhasi uno vakapiwa zita rekuti Jesu nevabereki vavo. Saka tinofanira kubuda pachena kuti Jesu watiri kutaura ndeupi wacho, kureva kuti Jesu Kristu kana kuti Ishe Jesu. Kungori naIshe Jesu mumwechete.
14. Kunyudzwa mumvura kamwechete muZita raIshe Jesu Kristu.
Iyi ndiyo nzira inorambwa nemaKristu zvakanyanya.
MuKristu mumwe nemumwe anosarudza nzira yake ega yekubhapatidzwa nayo kunyangwe maKristu vasingatendi mune imwe nzira yekubhapatidzwa nayo, vanoramba vachiita sevanoitsigira.
Nzira imwechete yerubhapatidzo inovagumbura kwazvo kana vakanzwa kana kuiona ndeyekupedzisira, muzita raIshe Jesu Kristu. Iyi ndiyo nzira yavanonyanya kuramba nekuti inodzikisira zvinotonga mune zvavanotenda zvekuti Mwari ndiye Tiriniti. Iyi itsika huru yakatendwa pazvakavanzika zveBabironi (zvakavanzika zvechipegani zvekuBabironi) izvo zvakapinda muchiKristu kupfurikidza Kereke yeRoman Catholic (Babironi yakavanzika) zvikazoendererawo mberi zvikatorwa nevanasikana vayo vakabuda mairi, vemasangano vakaedza kuzvibvisa panzira dzeRoma asi vakakundikana kubva pairi zvachose nekuda kwekusimbira pakutevera Tiriniti. Wezvenhoroondo Gibbon aitsanangura chiRoman Catholic se “chipegani chakabhapatidzwa”.
Saka rubhapatidzo haisingori nhanho yekuteerera, kuedzwawo kwekunzwisisa kwako kuti rubhapatidzo rwunorevei uye zvakakoshesesa, kuti Zita raMwari ndiani?
Unoziva here kuti zita raMwari ndiani? Unoziva here Zita raBaba Mwanakomana nereMweya Mutsvene kuti ndiani?
MATEO 3:6 Vakabhapatidzwa naye murwizi rwaJoridhani vachizvirevurura zvivi zvavo.
Tinoponeswa kupfurikidza kureurura zvivi zvedu uye kugamuchira Jesu saIshe nemuponesi wedu.
Pano rubhabhatidzo rwunofambidzana nekureurura zvivi zvedu zvakakoshera kudzikinurwa.
Izvi hazvishandi kuvana vaduku.
MATEO 3:11 Ini ndinokubhabhatidzai nemvura mutendeuke, asi unouya shure kwangu une simba kupfuureni, uyo wandisakafanira kutakura shangu dzake, iye uchakubhapatidzai noMweya Mutsvene nomoto: (kwete chiKristu chisina kushingirira kana chinotiitira isu).
Rubhapatidzo rwunofambirana zvakare nekutendeuka. Johani waitaura nevanhu vakuru kwete nevana vaduku.
MATEO 3:13 Zvino Jesu wakabva Garirea akasvika paJoridhani kuna Johane kuzobhapatidzwa naye.
14 Asi johani wakaedza kumudzivisa akati, ndini ndinofanira kubhapatidzwa nemi, ko movuya kwandiri seiko.
15 Asi Jesu wakapindura wakati kwaari, chirega hako zvino nokuti saizvozvo zvakafanira kuti tizadzise kururama kwose. Ipapo akamurega.
“Kururama”- ndingava akarurama sei pamberi paMwari?
Shoko raMwari rakakwanira.
Abrahamu waitenda muna Mwari... izvi zvaiverengwa sekururama.
GENESISI 15:6 Iye wakatenda JEHOVA, akamuti ndiko kururama kwake.
“Kuzadzisa” - kuzadzisika kwechiporofitachakaitwa kare kana kuti mumvuri weMurairo.
ISAYA 42:21 Zvakafadza JEHOVA, nokuda kwekururama kwake kukudza murayiro nekuurumbidza.
VAROMA 10:4 Nokuti Kristu ndimugumo wemurairo pakutsvaka kururama, kuno umwe noumwe unotenda.
Murairo waive wakarurama nekuti waive munongedzo waKristu uyo aizouya kuzozadzisa chirevo chawo chikuru. Zvinhu zvinofanira kuitika kuna Kristu nenzira imwechete sezvakaitika kuzvinhu zvemurairo sezvo murairo waive mumvuri wekuratidza zvaizouya.
ChiKristu chega ndicho chinokwana muchiratidzo chechitendero chakapfuura (chiJuda) chikazadzisa munongedzo kana kuti mumvuri mukuita kwakadzama.
VAKOROSE 2:16 Naizvozvo munhu ngaarege kuvapo anokutongai pazvokudya, kana zvokunwa nokuda kwomusi wemutambo, kana pakugara kwomwedzi, kana paSabata.
17 Izvi mumvuri wezvichauya asi muviri ndewaKristu.
VAHEBERU 8:4 Nokuti dai aive panyika, ungadai asina kuva muPirisita, nokuti vapirista varipo, vanobaira Mwari zvipo sezvinorehwa nemurairo:
5 Ivo vanoshumira mufananidzo nomumvuri wezvokudenga, sazvaakarairwa iye Mosesi odo kuita tabhernakeri; nokuti wakati: tarira uite zvose nomufananidzo, wawakaratidzwa mugomo.
VAHEBERU 10:1 Nokuti murairo zvaunomumvuri wezvinhu zvakanaka zvinouya usati uri mufananidzo chaiwo wezvinhu izvozvo, haungatongogoni kuwanisa avo vanoswedera gore rimwe nerimwe naizvozvo zvibairo zvavanoramba vachibaira Mwari.
Saka Kristu anova muPirisita mukuru , aifanira kusukwa nemuporofita nenzira imwechete iyo yakashandiswa naMosesi kusahambidza mupirisita mukuru Aaron, Mosesi asati azodza Aaron nemafuta.
REVHITIKO 8:5 Zvino Mosesi akati kuungano, ndizvo zvakarairwa naJEHOVA kuti zviitwe.
6 Mosesi akauya naAaron nevanakomana vake, akavashambidza nemvura.
Vanakomana vaAaron vaizova mapirisiti makuru kumashure kwake.
REVHITIKO 8:12 Akadirawo mamwe mafuta okuzodza nawo pamusoro waAaron, akamuzodza kuti amutsaure.
JOHANE 1:32 Johane akapupura, akati: ndakaona Mweya uchiburuka kudenga senjiva, akagara pamusoro pake.
Saka Jesu, muPirisita wedu mukuru, akashambidzwa nemuporofita Johane Mubhapatidzi akazodzwa neMweya kuzadzisa zvaidiwa nemurairo.
Akasukwawo sezvo aive chipiriso chedu chezvivi nechipiriso chedu chekupisira sezvo akapinda kugehena pachinzvimbo chedu paairipira zvivi zvedu.
II MAKORONIKE 4:6 Akaitawo midziyo yekusukira ine gumi, akaisa mishanu kurudyi nemishanu kuruboshwe, yokusukiramo; zvinhu zvezvipiriso, zvaipiswa , zvaisukirwamo; asi dziva rakanga riri ravaprista rekushambidziramo.
Jesu ndiye Gwaiana redu rechibairo. Aivewo chipiriso chedu chekupisira. Saka aifanira kushambidzwa mumvura. Izvi zvakaitwa murwizi rwaJoridhani.
EKSODO 12:8 Vadye nyama yaro usiku ihwohwo, yakagochwa, pamoto, nechingwa chisina kuviriswa; vaidye nemiriwo inovava.
9 Regai kuidya isina kuibva kana yakabikwa nemvura, asi yakagochwa pamoto musoro waro namakumbo aro pamwechetenoura hwaro.
10 Musasiye chimwe charo kusvikira mangwana; zvose zvaro zvinosara kusvikira mangwana muzvipise nomoto.
“Gwaiana redu rechibairo” paCalvari rakava chipiriso chedu chekupisira sezvo akafamba pamusoro pemoto wegehena kuti atore kiyi yegehena uye yerufu kubva kuna Satani akabva asiya zvivi zvedu zvatakareurura kuna Satani.
Kupiswa nemoto. Izvi zvaimiririra moto wegehena. Paive pasina mvura. Moto unonyanya kupisa kupinda mvura yakavira. Paive pasina tsitsi pakutambudwa kwakaitwa Jesu.
Zvese zvaive zakasaririra zvaipiswa zvese poshaikwa zvaizoonekwazve. Zvimwe zvaidyiwa zvimwe zvoitwa madota. Hapana chaizosvika pakuora pagwayana rePasiovha. Jesu ndiye Gwaiana redu rechibairo chePasiovha, haaizoona kuora paaifa, nekuti akamuka nezuva retatu kuora kusati kwapindira.
Chipiriso chechibairo chaishandiswa kamwechete zvaisara zvopiswa. Kupiswa zvinorevawo kuti chaishandiswazve kamwechete. Munhu anopira kuripira zvivi, kamwechete.
ZVAKAZARURWA 1:15 Tsoka dzake dzaive dzakafanana nesafuri inopeya, inenge yakanatswa muvira;...
ZVAKAZARURWA 1:18 Naiye Mupenyu; ndakanga ndafa tarira ndiri mupenyu nokusingaperi; ndine kiyi dzorufu nehadhesi.
Akatakura zvivi zvedu kupinda mumoto wehadhesi kunozvisiya panaSatani anova mudzi wechivi.
Kuva kwake asina zvivi uye akarurama, moto wehadhesi wakatadza kumumedza.
Muporofita Johane muBhapatidzi akashambidza Jesu muPirisita mukuru. Jesu akazozodzwa pakauya Mweya pamusoro pake.
MATEO 3:16 Jesu akati abhapatidzwa pakarepo akabuda mumvura. Zvino tarira denga rakamuzarurirwa akavona Mweya waMwari achiburuka senjiva. Akavuya pamusoro pake.
Kuzodzwa zvinoreva mafuta pamuviri, kwete kupinda mumuviri memunhu kupfurikidza kunwa mafuta aya.
Saka mweya hauna kupinda Maari. Aive atove neMweya kare sezvo aive mbeu yeMweya.
MATEO 1:20 Zvino wakati acharangarira izvozvo, tarira mutumwa waShe akazviratidzwa kwaari pakurota akati, Josefa mwanakomana waDavidi, usatya kutora Maria, mukadzi wako, nokuti icho chakagamuchirwa mukati make ndechoMweya Mutsvene.
Saka Mweya Mutsvene ndiye aive Baba vake. Asi Mwari ndiye aive Baba vake. Saka Mweya Mutsvene ndivo Mwari Baba. Saka ndivo mumwe uye Mweya mumwechete.
VAEFESO 4:4 Kuno muviri mumwe noMweya mumwe, sezvamakadanwa vo mutariro imwe yokudanwa kwake;.
ISAYA 43:11 Ini iyeni, ndini JEHOVA, kunze kwangu hakuna mumwe muponesi.
Hakuna Jesu semunhu wechipiri nemuponesi anomira parutivi pechigaro chaMwari.
JOHANE 1:33 Neni ndakange ndisingamuzivi; asi wakandituma kubhapatidza nemvura, ndiye wakati kwandiri: Uyo waunoona Mweya achiburuka pamusoro pake, ndiye unobhapatidza neMweya Mutsvene.
Jesu akazodzwa neMweya Mutsvene wakaburukira paari ukagara paari. Mweya Mutsvene hauna kupinda mukati make. Haana kubhapatidzwa neMweya Mutsvene. Asi ndiye anotobhapatidza vamwe neMweya Mutsvene.
MATEO 4:1 Zvino Jesu wakatungamirirwa neMweya kurenje kuzoidzwa naDhiyabhorosi.
2 Akati azvinyima chekudya kwemazuva anamakumi mana nohusiku hunamakumi mana, akabva oziya.
3 Zvino muidzi wakauya kwaari, akati kwaari, kana uri Mwanakomana waMwari raira mabwe awa zvive zvingwa.
4 Asi wakapindura akati, kwakanyorwa kuchinzi, munhu haangararami nechingwa bedzi, asi maShoko ose anobuda mumuromo maMwari.
5 Zvino Dhiyabhorosi akamuisa muguta dzvene akamuisa pachiruvu chetembere.
6 Akati kwaari, kana uri Mwanakomana waMwari uzviwisire pasi nokuti kwakanyorwa kuchinzi, Iye ucharaira vatumwa vake pamusoro pako. Pamavoko avo vachakusimudza. Kuti urege kugumbusa rutsoka rwako pabwe.
Satani akatora Gwaro rimwechete kurwisa rimwe Gwaro.
MATEO 4:7 Jesu akati kwaari, kwakanyorwavo, usaidza Mwari wako.
Asi Jesu akatorazve rimwe Gwaro akaritaura. Chakakanganiswa naSatani kwaive kutora Gwaro rimwe kuedza kurwisa mamwe maGwaro.
Usavimba nevhesi rimwechete Mateo 28:19 woita kuti rirwise Mabasa avaApostora 2:38.
MATEO 28:19 Endai naizvozvomudzidzise marudzi ose, muvabhabhatidze muzita raBaba neroMwanakomana neroMweya Mutsvene.
Jesu akataura izvi kuvadzidzi vake.
Tarirai kuti vakazadzisa sei murairo wekuenda kunobhapatidza.
MABASA AVAPOSTORA 2:38 Petro akati kwavari: tendevukai, mumwe nemumwe wenyu abhapatidzwe nezita raJesu Kristu, kuti mukanganwirwe zvivi, mupiwe chipiwa choMweya Mutsvene.
MABASA AVAPOSTORA 8:16 Nokuti wakanga asina kuburukira pamusoro poumwe wavo, vakanga vangobhapatidzwa muzita raShe Jesu bedzi. Uku kwaive kuparidza kwaFiripo.
MABASA AVAPOSTORA 8:38 Akaraira kuti ngoro imire; vakaburuka vose mumvura, iye Firipo nomuranda; akamubhapatidza.
Vose vakaburukira mumvura, Firipo haana kumira panyika yakaoma akamumwaya mvura.
MABASA AVAPOSTORA 10:46 Nokuti wakavanzwa vachitaura nedzimwe ndimi, vachirumbidza Mwari. Ipapo Petro akapindura akati
47 Kunomunhu here ungadzivisa mvura, kuti ava, vakapiwa Mweya Mutsvene sesu, varege kubhapatidzwa?
Vakagamuchira Mweya Mutsvene asi vaive vachiri kufanira kubhapatidzwa nemvura.
Zita raIshe ndiani?
VAFIRIPI 2:11 Kuti ndimi dzose dzibvumire dziti, Jesu Kristu ndiyeShe, kuti Mwari Baba varumbidzwe.
VAEFESO 4:5 Ishe mumwe, nokutenda kumwe, norubhabhatidzo rumwe.
MABASA AVAPOSTORA 19:5 Vakati vazvinzwa izvozvo, vakabhabhatidzwa muzita raShe Jesu.
Uku kwaive kuparidza kwaPauro.
VAROMA 6:3 Ko hamuzivi here kuti isu takabhapatidzwa muna Kristu Jesu, takabhabhatidzwa murufu rwake?
Baba naMweya Mutsvene havana kufa. Saka hatingabhapatidzwi murufu rwavo.
I VAKORINTE 10:2 Vose vakabhapatidzwa muna Mosesi mugore nomugungwa.
MaJuda akayambuka nemugungwa dzvuku nemadziro emvura akasimudzwa mumativi maviri epavaifamba. Mosesi, zita, zvinoreva kudhonzwa kubva mumvura. Saka vakabhapatidzwa muzita raMosesi vakabuda mumupata wemvura vari vapenyu.
Hondo yaFarao, zita rechinzvimbo, vakapindawo mumupata mugungwa dzvuku asi vakafa. Kubhapatidzo muzita, Mosesi, kwakaponesa maJuda. Kubhapatidzwa muzita rechinzvimbo, Farao, kwakauraya vana veIjipita.
Kubhapatidzwa muZita, Jesu Kristu, kunotigadzirira kuti tive takakwanira paKuuya kwake kweChipiri.
Kubhapatidzwa mumazita eZvinzvimbo, Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene zvinotigadzira kunopinda mukutambudzika kukuru apo tinofa kunyange takagamuchira Jesu seMuponesi wedu.
Hakuna anoziva zita raFarao chairo raakadaidzwa pakuberekwa kwake. Hakuna anotevera Tiriniti anoziva zita raBaba Mwanakomana nereMweya Mutsvene.
I VAKORINTE 15:29 Kana kuti chii chavachaita avo vakabhapatidzirwa kufa, kana vakafa vasingamuki zvachose? Nei vachibhapatidzirwa kunofa?
Vamwe vanhu vanotenda mune zvisiri izvo zvekubhapatidzwa pachinzvimbo chevadiwa vavo mudzimhuri dzavo vakafa kare vasina kubhapatidzwa. Munhu anofanira kutendeuka asati abhapatidzwa. Vakafa havakwanisi kutendeuka. Kubhapatidzwa kunotaura nezvekuvigwa. Haungavigi munhu akavigwa kare. Saka kuita uku kwaive kutadza zvachose. Asi zvakare Pauro aifananidza nyaya yerubhabhatidzo nerufu, kuvigwa nekumuka.
VAGARATIA 3:27 Nokuti vose pakati penyu, vakabhapatidzwa muna Kristu mukafuka Kristu.
Kubhapatidzwa muZita raJesu Kristu kunotitendera kuti titore Zita raJesu Kristu.
Mudzimai anotora zita remurume wake. Saka mwenga waKristu, chechi yechokwadi, inofanira kutora zita rake.
Murume Jesu Kristu haasi kuuya kuzotora amai Baba Mwanakomana naMweya mutsvene.
MATEO 4:10 Ipapo Jesu akati kwaari , Ibva Satani nokuti kwakanyorwa kuchinzi namata Ishe Mwari wako, umushumire iye woga.
11 Zvino Dhiyabhorosi akamurega. Vatumwa vakauya vakamushumira.
Rubhapatidzo runofanira kutevererwa nechiitiko chekutenda Shoko riri muBhaibheri. Ndiyo nzira yakakosha kuti wakaipa asiye kubata muhupenyu hwako.
Tingaite sei kuti Mateo 28:19 iyanane nemamwe Magwaro panyaya yerubhabhatidzo?
Zviri nyore tinofanira chete kuziva kuti Jesu Kristu ndiro zita raBaba Mwanakomana naMweya Mutsvene.
VAEFESO 4:5 Ishe mumwe, nokutenda kumwe, norubhapatidzo rumwe.
Saka zvakadaro tichava norubhapatidzo rumwe.
MATEO 28:18 Ipapo Jesu akasvika kwavari akataura akati; ndakapiwa simba rose kudenga napanyika.
19 Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, muvabhapatidze muzita raBaba nero Mwanakomana neroMweya Mutsvene.
20 Muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurairai imi tarirai ndinemi mazuva ose, kusvikira pakuguma kwenyika.
Tinoda kudzidziswa. Zita pahumwechete hwaro. Iri izita raMwari. Kune maZita eZvinzvimbo matatu ekudaidza nawo Mwari “Baba Mwanakomana naMweya mutsvene” asi tinoda kudzidziswa kuti zita rake chairo ndiani.
Rubhabhatidzo kuedzwa kunouya kuti uonekwe kuti unoziva zita raMwari here.
“Mwari Baba” zviri mumaGwaro, rakataurwa kanokwana kuita ka16 muBhaibheri.
JOHANE 6:27 Musabatira zvokudya zvinopera, asi zvekudya zvinogara kwevupenyu husingaperi, zvamuchapiwa noMwanakomana womunhu; nokuti Mwari Baba vakaisa chisimbiso Kwaari.
“Mwari Mwanakomana” hazvisi muMagwaro sezvo kutaura uku hakuna kubvira kwaonekwa kwakanyorwa muBhaibheri.
Asi kuti “Mwanakomana waMwari” hazviri muMagwaro sezvo zvakataurwa kanokwana kuita ka52 muBhaibheri.
Nei pari nemusiyano wakaita seuyu?
Mwari ndiMweya. Mwari haasi nyama neropa. Mwanakomana aimiririra humunhu hwaKristu, Baba zvaimiririra hunhu hwake Hwatisingagoni kutsanangura huri pamweya.
Mwari Mwanakomana zvinoreva kuti Mwari inyama neropa. Izvi kutadza hazvisiriizvo.
Mwanakomana waMwari zvioreva kuti Munhu Jesu aive chikamu cheMweya waMwari unoshamisa wairarama Maari.
JOHANE 14:10 …. asi Baba, vanogara mandiri, ndivo vanoita basa ravo.
“Mwari Mudzimu Unoera” hazvisi muMagwaro. Izvi hazvina kubvira zvataurwa muBhaibheri. Nei?
SaBaba, Mwari aive Mweya unoshamisa waigara pamusoro pemaJuda. Mweya uyu ndiwo waive kuzara kwaMwari. Paive pasina chimwe chaidiwa kutsanangura kuzara kwaMwari. Saka “Mwari Baba” zvinotsanangura Mwari zvakazara.
Nhasi uno Mweya waMwari unoshamisa uri kurarama mumuviri wemunhu anova Jesu anorarama ari pachigaro chenyasha sechipiriso chedu kuzvivi zvedu. Mweya waMwari hauoneki saka unobva pachigaro chenyasha seMweya Mutsvene kuzotitungamirira uye kutichengetedza. Saka kuti Mweya Mutsvene kutsanangura zvakaita Mwari zvakajeka asi kumutsanangura zvakazara tinofanirawo kudzokera kumaitiro ake ari Munhu Jesu uyo agere pachigaro chenyasha. Saka Jesu akakwanisa kuita zvaisagoneka. Akava zvose munhu uye Mwari. Kubata kwake kunoshamisa kunopfurikidza neMweya Mutsvene, kubata kwake panyama ndiye Mwanakomana waMwari, Munhu akafira zvivi zvedu zvino agere pachigaro chenyasha. Kubata kwese kwaanoita uku hapana kumwechete kunokwanisa kutsanangura hukuru hwaMwari zvakazara. Saka hatikwanisi kuti “Mwari Mweya Mutsvene” kana kuti “Mwari Mwanakomana”.
Asi kubata kwevose panyama uye paMweya unoshamisa pakuita kwaJesu kwakabatana kutipa tsanangudzo yakakwana pamusoro paMwari.
Mucharangarira here zvakataurwa naJesu kuna Satani? Zvakanyorwa. Saka tinofanira kudzidza kugara tichitevera zvakanyorwa muMagwaro.
MATEO 16:15 Akati kwavari, ko imi munoti ndini ani?
16 Ipapo Simoni Petro akapindura akati, ndimi Kristu Mwanakomana waMwari mupenyu.
17 Jesu akapindura akati kwaari, wakaropafadzwa iwe, Simoni Bar- Jona nokuti Nyama neropa hazvina kukuzivisa izvozvo asi Baba vangu vari kudenga.
18 Neni ndinoti Kwauri ndiwe Petro, pamusoro peruware urwu ndichavaka kereke yangu, masuwo eHadhesi haangaikundi.
19 Ndichakupa kiyi dzovushe hwokudenga. Chinhu chipi nechipi chauchasunga panyika chichasungwa kudenga nechinhu chipi nechipi chauchasunungura panyika chichasunungurwa kudenga.
Ruware rwaimiririra zaruriro yekuti Jesu aive ani.
Kristu ndiye ruware.
I VAKORINTE 10:4 Vose vakanwa zvokunwa padombo romweya ravakatevera; dombo iro rakanga riri Kristu.
Dombo harizi Petro. Mavhesi mana anotevera akadaidzwa kuti Satani.
Mateo 16 :23 Ibva shure kwangu Satani.
Petro aizoramba Jesu katatu asati arovererwa.
Mateo 7:24 Naizvozvo mumwe nemumwe anonzwa mashoko angu awa, akaaita ungafananidzwa nomurume wakachenjera. Wakavaka imba yake paruware.
25 Mvura ikanaya, mvura zhinji ikavuya, mitutu ikavhuvhuta, ikarova imba iyo ikasawa nokuti yakanga yakateiwa paruware.
RUKA 3:7 Naizvozvo wakati kuvazhinji vaiuya kuzobhapatidzwa naye: Imi vana venyoka, ndianiko wakakunyeverai kuti mutize kutsamwa kunovuya?
8 Naizvozvo berekai zvibereko zvakafanira kutendevuka; musatanga kureva mumoyo menyu, muchiti: Abrahamu ndibaba vedu; nokuti ndinoti kwamuri: Mwari ungamutsira Abrahamu vana pamabwe aya.
Hatifanirwi kubhapatidzwa kunze kwekunge tanyatsoziva kuti kutendeuka kwedu ndekwezvirokwazvo. Tinokwanisa kutaura mazwi akanaka asi tisina kurevesa paari saka nekudaro kutendeuka kwedu hakuzoshandi.
RUKA 7:29 Zvino vanhu vose navateresi vakati vachizvinzwa: vakati Mwari wakarurama, zvavakanga vabhapatidzwa nerubhapatidzo rwaJohane.
30 Asi vaFarise navadudziri vomurairo vakaramba kufunga kwaMwari pamusoro pavo, vakasabhapatidzwa naye.
Kana tichinge tisina kubhabhatidzwa nenzira yakakodzera hatisati tasangana nekufunga kwaMwari.
Kana tisinganyatsozivi kuti Mwari ndiani, zvino hatizokwanisi kuziva zita rake saka tinozobhapatidzwa zvisiri izvo.
MATEO 16:19 Ndichakupa kiyi dzovushe hwekudenga. Chinhu chipi nechipi chauchasunga panyika chichasungwa nekudenga nechinhu chipi nechipi chauchasunungura panyika chichasunungurwa kudenga.
Chii chakasungwa naPetro?
Chii chakasunungurwa naPetro?
JOHANE 1:33 Neni ndakanga ndisingamuzivi; asi wakandituma kubhapatidza nemvura, ndiye wakati kwandiri uyo waunoona Mweya achiburuka pamusoro pake, akagara pamusoro pake, ndiye unobhapatidza noMweya mutsvene.
Rubhapatidzo rwemvura rwunofanira kuteverwa nerubhapatidzo rweMweya Mutsvene.
JOHANE 16:13 Asi kana asvika, iye Mweya wazvokwadi, uchakutungamirirai muzvokwadi yose, nokuti haangatauri zvake, asi zvaakanzwa, ndizvo zvaachataura, uye uchakuparidzirai zvinouya.
Humbowo hunoratidza kuvapo kweMweya Mutsvene kukwanisa kutenda nekunzwisisa Magwaro.
Petro akasunga rubhapatidzo rwaJohane mubhapatidzi akasunungura rubhapatidzo rutsva muZita raJesu Kristu.
MABASA AVAPOSTORA 2:36 Zvino imba yose yavaIsraeri ngaizive kwazvo, kuti uyu Jesu wamakarovera pamuchinjikwa, Mwari wakamuita Ishe naKristu.
Petro akavadzidzisa pamusoro pemazita eZvinzvimbo zvaJesu anova zvose Ishe naKristu akazovabuditsira pachena kuti Zita raMwari ndi Jesu Kristu.
MABASA AVAPOSTORA 2:38 Petro akati kwavari: tendevukai mumwe nemumwe wenyu abhapatidzwe nezita raJesu, kuti mukanganwirwe zvivi, mupiwe chipiwa choMweya Mutsvene.
Akatisunungura kubva pazvivi zvedu nekutizivisa nzira: tendevukai, mubhapatidzwe muZita raJesu Kristu mugopiwa rubhapatidzo rweMweya Mutsvene.
MABASA AVAPOSTORA 8:12 Zvino vakati vatenda Firipo, wakaparidza mashoko ovushe bwaMwari, nezita raJesu Kristu, vakabhapatidzwa, varume nevakadzi
13 Naiye Simoni akatenda vo, ndokubhapatidzwa vo, akagara naFiripo; akashamiswa, achiona zviratidzo namabasa esimba makuru, akanga achiitwa.
14 Zvino vaapostora vaiva paJerusarema, vakati vanzwa kuti vaSamaria vakanga vagamuchira Shoko raMwari, vakatuma Petro naJohane kwavari:
15 Ivo vakaburukira' ko, vakavanyengeterera kuti vapiwe Mweya Mutsvene.
16 (Nokuti wakanga usina kuburukira pamusoro poumwe wavo; vakanga vangobhapatidzwa muzita raShe Jesu bedzi.)
MABASA AVAPOSTORA 8:38 Akaraira kuti ngoro imire; vakaburukira vose mumvura, iye Firipo nomuranda akamubhapatidza.
(Kumwaya mvura kwaisaita kuti vose vapinde mumvura.)
MABASA AVAPOSTORA 19:1 Zvino Aporo achiri paKorinte, Pauro wakati agura namativi enyika okumusoro, akasvika Efeso, akawana vamwe vadzidzi.
2 Akati kwavari: Makagamuchira Mweya Mutsvene mukutenda kwenyu here? Vakati kwaari kwete, hatina kutongonzwa kuti Mweya Mutsvene uripo.
3 Akati kwavari ko makabhapatidzwa norubhapatidzo rwupiko? Vakati norubhapatidzo rwaJohane.
(Petro aive asunungura kiyi yerubhapatidzo rweMweya Mutsvene urwo rwaizovatungamirira muchokwadi chese chinova kutendeuka nekubhapatidzwa muzita raJesu Kristu.)
4 Zvino Pauro akati: Johane akabhapatidza norubhapatidzo rwekutendevuka achiudza vanhu kuti vatende kuna iye unozovuya shure kwake, iye Jesu Kristu.
(Pauro akavaudza kuti rubhapatidzo rwaPetro rwaive rwasunga rubhapatidzo rwaJohane urwo rwaive rwatoita chimwe chokwadi chakadzama apo Petro aive azivisa Zita reMuponesi aive atiwanira ruponeso paCalvari. Saka kana usina kubhapatidzwa muzita raShe wedu Jesu Kristu unofanira kubhapatidzwa patsva. )
5 Vakati vazvinzwa izvozvo, vakabhapatidzwa muzita raJesu Kristu.
MABASA AVAPOSTORA 10:44 Petro wakati achataura mashoko awa, Mweya Mutsvene akaburuka pamusoro pavose, vakanzwa shoko.
MABASA AVAPOSTORA 10:47 Kune munhu here angadzivisa mvura, kuti ava, vakapiwa Mweya Mutsvene sesu, varege kubhapatidzwa?
48 Zvino akaraira kuti vabhapatidzwe muzita raJesu Kristu. Ipapo vakakumbira kwaari kuti ambogara mamwe mazuva.
(Kunyangwe ukagamuchira Mweya Mutsvene zvakadaro unofanira kubhapatidzwa muzita raShe Jesu Kristu.)
VAFIRIPI 2:11 Kuti ndimi dzese dzibvumire dziti, Jesu Kristu ndiyeShe, kuti Mwari, baba, arumbidzwe.
DEUTERONOMIO 6:4 Zvino mashoko awa andinokuraira nhasi, anofanira kuva mumoyo mako:
ZEKARIA 14:9 JEHOVA achave mambo wenyika yose; nezuva iro JEHOVA achave mumwechete, nezita rake rimwechete.
MARKO 12:29 Jesu akapindura, akati; wokutanga ndiwoyu: Inzwai vaIsraeri, Ishe Mwari wedu, ndiye Ishe mumwe chete.
1 VAKORINTE 8:6 Asi isu tinongova naMwari mumwe bedzi, ndivo Baba; zvinhu zvose zvinobva kwaari , nesu tiripo nekuda kwake; vuye Ishe mumwe, Jesu Kristu; zvinhu zvose zviripo naye, nesu tiripo naye.
VAEFESO 4:5 Ishe mumwe, nokutenda kumwe, norubhapatidzo rumwe,
VAKOROSE 3:17 Vuye zvose zvamunoita, kana zviri zveshoko kana basa, itai zvose nezita raShe Jesu, muchivonga Mwari Baba naye.
Rubhapatidzo kuita kwekutenda uyezve ishoko rekutenda. Saka zvinofanira kuitwa muzita raJesu.
4 Naizvozvo pakubhapatidzwa takavigwa pamwechete naye murufu; kuti saiye Kristu akamutswa kuvakafa nokubwinya kwaBaba, saizvozvo nesu vo, tifambe nevupenyu bwutsva.
Rubhapatidzo mufananidzo werufu nekuvigwa.
Tinovigwa kamwechete, takarariswa nemisana yedu, takafukidzwa nevhu sezvo tichinge tisingakwanisi kefema.
Takarara nemusana pasi pemvura, hatikwanisi kufema zvakare. Chiratidzo chaicho chekufa nekuvigwa.
Ndapota cherechedzesai kuti hakuna pakabvira pabhapatidzwa munhu nevadzidzi Muzita raBaba Mwanakomana nero Mweya Mutsvene.
Nekuti vaiziva kuti Mwari akava Munhu kuitira kuti afire zvivi zvedu. Zita raMwari paakava munhu ndiJesu Kristu.
Iyi ndiyo kiyi yerubhapatidzo, inomiririra rufu, kuvigwa nekumuka kwaJesu.
VAEFESO 3:14 Nemhaka iyi ndinofugama nemabvi angu kunaBaba, vaShe wedu Jesu Kristu.
15 Avo rudzi rwose kudenga napanyika rwunotumidzwa nezita ravo.
Tinofanira kutora zita raJesu Kristu.
II VAKORINTE 11:2 Nokuti ndine godo pamusoro penyu negodo raMwari; nokuti ndakakuwanisai nomurume mumwe, kuti ndikuisei kuna Kristu semhandara yakachena.
Mwenga anofanira kutora zita raKristu. Izvi zvinoitika riini? Kana pasiri parubhapatidzo, zvino riini?
Nyika yakambobapatidzwa kamwechete, yakafukidzwa neMvura panguva yemvura yaNoa.
Tese tiri guruva umwe neumwe wedu. Saka nesuwo tinofanira kuenda pasi pemvura yerubhapatidzo kuti titore zita remurume wedu Jesu Kristu.